Guddiga doorashooyinka madaxa banaan oo qabtay doorashadii ugu horeysay - BBC News Somali
29 Jannaayo 2018
Image caption Xaliimo Ismaaciil Ibraahim (Xaliimo Yarey) guddoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa banaan
Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliya Xaliimo Ismaaciil Ibraahim (Xaliimo Yareey) ayaa BBC-da u sheegtay in saddex kursi oo ka banaan baarlamaanka la qaban doono dhawaan, shalayna la qabtay doorashada kursi afaraad oo banaanaa.
Kuraastan waxaa ka mid ah kursigii wasiirkii la dilay Cabaas Cabdullaahi Siraaje, iyada oo shalay magaalada Jowhar lagu qabtay doorashada kursi uu horey u baneeyay Cabdullaahi Maxamed Sanbaloolshe oo ahaa taliyihii NISA, balse dib ugu tartamay kursigan kadib markii xilka laga qaaday.
Tartankii Jowhar waxaa ku guuleystay Nuur Iidow Beyle oo ay wareegii labaad isla soo gaareen Sanbaloolshe.
Doorashadii maanta: Muudday oo Faarax ka badiyey
Jawaari oo mar kale loo doortay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya
Soomaaliya diyaar ma u tahay doorasho hal cod hal qof ah ?
Xaliimo Yareey oo sharaxaysa kuraasta ay doorashadooda qabanayaan ayaa tiri "Kuraasta banaanaatay waa afar, mid shalay ayaan Jowhar ku qabanay, waxaa jira mid deegaan doorashadiisu ay Xamar tahay oo beelaha waqooyiga leeyihiin, waxaa jira mid uu Jubbaland yahay, iyo mid Garoowe ah".
Guddoomiyaha ayaa sheegtay in qabashada doorashada ay ku xirantahay in la helo dhaqaalihii lagu maamuli lahaa, sida qarashkii ergada lagu daabuli lahaa, meelna lagu dajin lahaa.
Waa markii ugu horeysay oo guddigan doorashooyinka qaran uu doorasho qabto, waxayna Xaliimo sheegtay in tii ka dhacday magaalada Jowhar ay ahayd mid xaq iyo xalaal ah.
Inkasta oo uu guddigan jirey doorashooyinka baarlamaanka ee dhacay November, 2016-kii, haddane waxaa doorashadii maamulay guddi hadda waqtigiisa dhacay oo lagu magacaabi jirey Guddiga doorashooyinka dadban ee heer federaal iyo mid heer dowlad goboleed oo wada shaqaynayay, waxayna arrintan ku timid isfaham siyaasadeed oo dhexmaray hoggaamiyihii madasha.
Waxa ay codsatay in aanan farogalin lagu samaynin doorashada, oo guddiga ay u madax banaanaadaan shaqadooda, gaar ahaan meelaha dowlad goboleedyada ah oo ay doorashooyinka ka dhacayaan.
Waxa ay intaas ku dartay in doorashadan ay aad uga duwanayd sidii tii hore, waxayna tusaale usoo qaadatay in ergada aanan la kala kaxaysanin oo aanan meelo lagu kala xaraysanin.
Guddiga doorashooyinka madaxa banaan oo ah hay'ad dastuuri ah ayaa shaqooyinka horyaala waxaa ka mid ah in marka la gaaro sanadka 2021-da ay dalka ka qabtaan doorashooyin qof iyo cod ah, kuwaas oo marka laga tago hadal heynta aysan jirin talaabo muuqata oo dhankaas loo qaaday.
In doorasho ay dhacdo waxaa marka hore loo baahanyahay la helo tirakoobka dadka ku nool dalka, in la diiwaangaliyo codbixiyeyaasha iyo in la dhamaystiro arrimaha xisbiyada badan, iyo arrimo kale.